November 21, 2021 N88LeaveaComment on मलाई डाक्टरले लड्न हुँदैन भनेका छन् : केपी ओली
काठमाडाैं । नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू लड्न नहुने चिकित्सकले सुझाव दिएको बताएका छन् । नेपाल खेलकुद महासंघले आइतबार गरेको ‘खेल नीति सम्मेलन’लाई सम्बोधन गर्दै ओलीले उनले आफूलाई पनि खेलमा रुचि भएको भए पनि चिकित्सकले लड्न नहुने सुझाव दिएकाले खेल्न नसक्ने बताएका छन् । दुई पटक मिर्गौला प्रत्यारोप गराएका ओलीले भने, […]
कहाँ छन् बामदेव गौतम ? एकाएक किन भए गुमनाम !
November 21, 2021 N88LeaveaComment on कहाँ छन् बामदेव गौतम ? एकाएक किन भए गुमनाम !
काठमाडौं। नेकपा एमाले फुटेपछि नेता बामदेव गौतम अहिले सुनसान अवस्थामा छन् जस्तो देखिएको छ । केही समय एकता अभियान भन्दै लागि परेका नेता गौतम अहिले भने कता कता छन्, जस्तो भएको छ । सायद उनी मिडियामा समेत कमै आएका कारण पनि यस्तो हुनसक्छ । यद्यपि, उनी अहिले पनि एकता अभियान भनेरै लागि परेको बताइन्छ । […]
गृहजिल्लामै नराम्राेसँग पछारिए रमेश लेखक, एनपी साउदले देखाइदिए पावर !
November 21, 2021 N88LeaveaComment on गृहजिल्लामै नराम्राेसँग पछारिए रमेश लेखक, एनपी साउदले देखाइदिए पावर !
महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरमा नेपाली कांग्रेसका हस्ती एनपी साउद र रमेश लेखकबीच वर्चश्वको लडाइँ छ । कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल गुट हुँदा कञ्चनपुरमा देउवाभित्रैका साउद र लेखकको उपगुट छ । यसको असर १४औं महाधिवेशनअन्तर्गतको प्रदेशसभा अधिवेशनमा पनि देखियो । जहाँ लेखक कमजोर देखिए भने साउद बलियो रुपमा आए । अरु त […]
ओलीले प्रचण्डलाई यत्तिकै नछोड्ने, माफी होइन जेल चलान गर्ने घोषणा
November 21, 2021 N88LeaveaComment on ओलीले प्रचण्डलाई यत्तिकै नछोड्ने, माफी होइन जेल चलान गर्ने घोषणा
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा आममाफी दिने कुरामा सहमत नहुने बताएका छन् । नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पन्ध्र वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा ओलीले आइतबार विज्ञप्तीमार्फत द्वन्द्वकालमा भएका मानवताविरोधी ज्यादती तथा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आममाफी दिन नहुने बताएका हुन । कतिपय घटनामा […]
सरकारमा पुगेपछि माओवादीको चन्दा आ”तंक, छापामार शैलीमा तोकेरै पैसा उठाउँदा पनि प्रचण्ड मौन
November 21, 2021 N88LeaveaComment on सरकारमा पुगेपछि माओवादीको चन्दा आ”तंक, छापामार शैलीमा तोकेरै पैसा उठाउँदा पनि प्रचण्ड मौन
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन पुसमा हुँदैछ । अहिले वडा र नगर सम्मेलनहरु भइरहेका छन् । तर सम्मेलनका नाममा माओवादी केन्द्रले चन्दा मागेर आतंक मच्चाएको छ । विगत १० वर्ष जनयुद्धमा अन्धाधुन्ध चन्दा मागेर दुख दिएको माओवादीले फेरि त्यहीँ शैली अपनाएको छ । सम्मेलनका नाममा तोकेरै व्यक्तिसँग माओवादीका नेता कार्यकर्ताले पैसा असुल्न थालेका […]
प्रचण्ड-माधवको बहिर्गमनले झनै शक्तिशाली बन्यो एमाले सदस्य संख्या तीन गुणा बढ्याे !
November 21, 2021 November 21, 2021 N88LeaveaComment on प्रचण्ड-माधवको बहिर्गमनले झनै शक्तिशाली बन्यो एमाले सदस्य संख्या तीन गुणा बढ्याे !
काठमाडाैं । यसरी हेर्दा नेकपाको विभाजन र माधव नेपाल समूहको बहिर्गमनले एमालेमा कुनै क्षति पुगेको देखिदैन । नेकपा कार्यकाल (२०७५ जेष्ठ ३ गते देखि २०७७ पुष ७ सम्म) अवधिमा पार्टी प्रवेशमा जुन ठहराव आएको थियो, नेकपा (एमाले) को पुनस्र्थापना पश्चातपछि एमालेमा प्रवेश गर्नेको लहर नै चलेको छ । एकीकृत कालमा पार्टी सदस्यता वितरणमा जुन शुन्यता […]
एमालेकाे महाधिवेशनमा माछा र मासु नटुटाइने, विशेष भोज ओलीले खुवाउने (मेनुसहित)
November 21, 2021 N88LeaveaComment on एमालेकाे महाधिवेशनमा माछा र मासु नटुटाइने, विशेष भोज ओलीले खुवाउने (मेनुसहित)
चितवन । आगामी मंसिर १० देखि १२ सम्म चितवनमा नेकपा एमालेको १० औँ महाधिवेशन भव्य रुपमा गर्न लागिएको छ । महाधिवेशनमा उपस्थित सबैका लागि गाँस, बाँसको दरिलो व्यवस्था गरिएको छ । तीन दिने महाधिवेशनको पहिलो विशेष भोज अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खुवाउने बताइएको छ । १० मंसिरमा नारायणगढस्थित नारायणी नदी किनारमा एमाले महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र […]